Abafuni uhlakazwe uVukayibambe | IOL Isolezwe
Abafuni uhlakazwe uVukayibambe
Isolezwe / 21 December 2012, 2:01pm / SAPA
Gauteng ANC youth league nominated their preferred candidate for Mangaung. Her Chairman Lebogang Maile addresses the media at the press conference held at Walter Sisulu house in Johannesburg to announce the candidates. 211112 Picture: Boxer Ngwenya
I-ANC Youth League isikubeke kwacaca ukuthi izophikisana nemizamo yokuthi kuhlakazwe isigungu sayo esiphezulu ngoba ayihambisani nalokhu.
Lokhu kushiwo umholi walolu phiko eGauteng uMnuz Lebogang Maile (osesithombeni) ngemuva kokuthi idlanzana lezithunywa ebezihambele ingqungqutela kaKhongolose eMangaung ziphakamise ukuthi kuqedwe ngesigungu se-ANCYL.
“Angisiboni isizathu esibambekayo esingaholela ekutheni kuhlakazwe isigungu esiphezulu ku-ANCYL njengoba sekukhona abaphakamisa lokho ku-ANC,” kusho uMaile.
Lesi siphakamiso senziwe izithunywa emqulwini ohambisana nokubuyekezwa kabusha kwe-ANC nezinhlaka zayo.
“UKhongolose udinga uphiko lwentsha oluqinile nolunamandla futhi olukhulumayo ngezinto ezibalulekile ezithinta isizwe nombutho wonkana. Ngakho uma befuna kwenzeke kanjalo lokhu kusho ukuthi i-ANCYL izoba buthaka,” kusho uMaile.
Uthe yize kukhona abaphakamise ukuthi kuhlakazwe i-ANCYL kodwa lo mbono awuzange ukuthole ukwesekwa noma isasasa kumalungu eqembu.
Lokhu kwenzeka nje uJulius Malema owayenguMengameli we-ANCYL waxoshwa embuthweni kwathi umkhulumeli uFloyd Shivambu noNobhala-Jikelele uSindiso Magaqa bamiswa.
Kusuka lapho i-ANCYL iholwa isigungu esingaphelele nePhini likaMengameli uRonald Lamola obambe esikaMengameli.
UMalema uthumele incwadi engqungqutheleni ebiseMangaung encenga ubuholi be-ANC ukuthi babuyiselwe ezikhundleni zabo.
Nokho bahlangabezane nembibizane ngoba uNobhala-Jikelele uMnuz Gwede Mantashe uthe ifike sekudlule isikhathi izinqumo sezithathiwe, ngakho angeke besakwazi ukubhekana nayo.
Ngakolunye uhlangothi uLamola yena usigxekile lesi senzo sikaMalema nezakhe wathi bakhombise ukubukela phansi izinhlaka ze-ANC ngoba bekufanele belinde babone ukuthi kwenzekani. Uthe nabo njenge-ANCYL bebevele behlele ukuthi lolu daba baluphakamise ebuholini ngendlela efanele ukuze luxoxwe kodwa baphoxekile ngokuxhamazela kwabo oMalema.